MUQDISHO, Somalia - Guddiga Kheyraadka Gollaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somalia ayaa kasoo horjeestay Shirka maalint berri ah, 7da Febuary ka furmaya magaaladda London, kaasoo la sheegay in lagu xaraashayo Shidaalka dalka.
Qoraal uu soo saarey ayuu Guddiga ku sheegay in Shirka uu yahay mid sharci darro ah, oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka, islamarkaana wixii dhibaato ah oo ka timaada ay mas'uuliyadeedu qaadayso Xukuumadda, gaar ahaan Wasaaradda Batroolka.
Shirka London, ayaa dareen badan ku dhaliyay shacabka Soomaaliyeed, maadaama lagu soo beegay xilli aan dalka lahayn shuruuc lagu maamulo soo saarista Kheyraadka, sidoo kalena aan Baarlamaanka ansixin Sharciga Batroolka [Petroleum law].
Waxaa sidoo kale lagu soo beegay Shirkan oo ay ka qeybgalayaan shirkado daneeya Shidaalka Somalia iyadoo uu khilaafka qeybsiga kheyraadka u dhaxeeyo dowladda Dhexe iyo maamul goboleedyada dalka.
Mucaaradka ayaa ku baaqey in lagu qabto London dibadbax si loo baajiyo xaraashka Shidaalka dalka, iyadoo Guddiga Kheyraadka Aqalka Sare uu sheegay in daah-furnaan la'aan ay ka jirto dhinaca Wasaaradda Batroolka iyo Shirkadda Spectrum oo sahan ku sameysay goobaha shidaalka uu ku jiro, islamarkaana haysa xogta Kheyraadka Somalia.
HALKAN KA AKHRI: